चिनियाँ नेतृत्वलाई ‘बद्नाम’ नगर्न अमेरिकालाई बेइजिङको आग्रह ! « MNTVONLINE.COM
एजेन्सी । अमेरिकामा जो बाइडन राष्ट्रपति निर्वाचित बनेपछि उनले सरकारका एक वरिष्ठ प्रतिनिधिसँगको उच्चस्तरीय वार्तामा बेइजिङले अमेरिकालाई चिनियाँ नेतृत्वको ‘बद्नाम’ गर्ने काम रोक्न आग्रह गरेको छ ।
सोमवार सम्पन्न हुने दुईदिने भ्रमणका क्रममा शर्मनले दुवै दिन चीनको उत्तरपूर्वमा रहेको तियानजिन सहरमा बताएका छन् । धेरैले अमेरिका–चीनको यो वार्तालाई बाइडन र सी चिनफिङबीच हुन सक्ने भेटको तयारीका रूपमा लिएका अथ्र्याएका छन् ।
युद्ध अन्त्यका लागि दक्षिण कोरियासँग किम जङ–अनकी बहिनीको यस्तो सर्त !
सोमालियामा बम आक्रमणमा परी ७ जनाको मृत्यु, ९ घाइते !